Cesc Fabregas oo heshiis 5 sano ah u saxiixay Kooxda Barcelona Video+Sawiro – SBC
Cesc Fabregas oo heshiis 5 sano ah u saxiixay Kooxda Barcelona Video+Sawiro
Ciyaaryahanka u hilboobay halkii uu ku dhashay Cesc Fabregas ayaa maanta heshiis shan sano ah u saxiixay kooxda uu ku haminayey in uu mar uu shaatigeeda uu ku ciyaaro ee Barcelona.
Cesc Fabregas ayaa qalainka ku duugay heshiis mudo shan sano ah jiraya oo uu kula joogayo kooxdii uu ka soo hayaamay ee Barcelona isagoo 16 sano jir waxaana uu mahad celin gaar ah u diray macalinkii soo barbaariyey ee mudada sideeda sano ah gacanta ku hayey kana dhigay mid ka mid ah xidigaha kubada cagta ee aduunka ugu caansan.
Fabregas ayaa ka hor intii aanu qalinka ku duugin heshiiska Barcelona uu ugu soo wareegayo wuxuu marey baaritaan dhanka caafimaadka ah oo la hubinayo xaaladiisa caafimaad, waxaana ka dib uu ku soo bandhigay garoonka Nou Camp dhoolatus ku aadan qaab ciyaareedkiisa.
In ka badan 30 kun oo taageerayaasa kooxda Barcelona ayaa saaka iska soo xaadiriyey garoonka Nou Camp si ay halkaasi ugu soo dhaweeyaan wiilkoodii ka tagey halkaasi 16 jir isagoo ah.
“Uma hayo wax hadal & oraah oo aan ugu mahadceliyo oo ku aadan wixii uu aniga ii sameeyey, waligeyna ma hilmaami doono” ayuu yiri Cesc Fabregas oo ka sheekaynayey qalbi wanaaga uu u hayo macalinka kooxda Arsenal ee soo barbaariyey Mr. Arsene Wenger.
“Saaxiibtinimadu waa wax cajiib ah, maalinimadii Jimcaha waxaan ku soo iri nabadgalyo, si dareen ku jiro ayaan u soo kala tagnay, waana u ilmeeyey waayo sida Aabahay oo kale ayuu iiga dhigan yahay, hal goobna uguma hadli doono wuxuu ii qabtey”.
Cesc Fabregas intaasi kuma ekeyn niyad wanaaga uu u hayo macalin Wenger wuxuuna mar kale yiri “Waxaan u dirayaa fariin aan ku leeyahay waligey kuma ilaawi doono waxa aad ii sameysay, hadii aanan heli laheyn isaga (Wenger) halkan maanta ma joogeyn mana heleen riyadeyda”.
Mar kale ayuu ka hadley talada uu u hayo kooxdii uu la joogay 8 sano ee Arsenal wuxuuna yiri “Waxaan filayaa in hadii Arsenal ay doonayso inay sii ahaato koox weyn oo ah sida ay hada yihii waa inay xagsadaan isaga (Arsene Wenger) oo ay ku sii jiraan hogaankiisa, anigana wuxuu ii yahay qofkii iigu weynaa ee aan kula kulmo kubada cagta”.
Cesc Fabregas wuxuu ka gaabsadey in uu ka hadlo sababta uu uga tagey kooxda qorileyda ee Arsenal waxaase uu sheegay in uu waqti kale la hadli doono taageerayaasha Arsenal uuna sharaxaad ka bixin doono arinkaasi.
“Aad ayaan uga niyad jabsanahay inaan ka baxo Arsenal waayo mudo sanooyin ah ayaan saaxiib la ahaa taageerayaasha, waqti badan ayay qaadatey sidii loo dhisi lahaa kalsoonidaasi iyo saaxiibtinimadasi aad ayaana uga niyad jabsanahay inaan waayo iyaga (taageerayaasha Arsenal).
“Aad ayaan uga xumahay waxba kuma oran iyaga (Taageerayaasha Arsenal) mudo bilooyin ah, waayo waxaan ku jiray murugo ku aadan inaan kooxda ka tago, nolasheyda sadex meelood oo meel 8 sano waxaan la qaybsadey Arsenal, aad ayaan uga murugaysanahay laakiin nolashu way sii soconaysaa”. Ayuu yiri Cesc Fabregas oo calaal weyn ku sagootiyey Arsenal oo ah kooxdii soo gardaadisey.
Mar uu ka hadlayey kooxda Barcelona oo uu ku soo biiray wuxuu sheegay in uu ku faraxsan yahay in loo xiro lambarka 4 oo ah kii uu u qaadan jirey Arsenal.
“Halkan (Nou Camp) waxaan la imid haybad weyn, waxaa jiri doona wax badan oo aan ka baran doono tababarahan (Guardiola) iyo kooxdan weyn (Barcelona), waxaan la ciyaaray laba ka mid ah ciyaartoydan oo kala ah Lionel Messi & Gerard Pique markii aan ahaa 13 jir kuwa kalena waxay ahaayeen 18 jir si wanaagsan ayaan u aqaan badankood”.
Macalinka iyo ciyaartoyda Emirates Stadium ee waqooyiga magaalada London waxay niyad ku sagootiyeen captain-koodii Fabregas oo wixii maanta ka dambeeya Barcelona u ciyaari doona waxaana tababaraha kooxda Qorileyda uu yiri “Muhiimadu waa inaynu yoolkeena abaarno, waxaan u rajeynayaa Cesc nasiib wanaagsan, wuxuu ahaa mid ka mid ah ciyaartoydeena ugu wanaagsan, waana run inaynu luminay mid ka mid ah laacibiinta aduunka ugu wanaagsan, waynunana ka murugooneynaa, laakiin mid ogaada kooxdan (Arsenal) waxay jirtaa 125 sano waxaa jiray ciyaaryahano badan oo ka tagey, kooxduna way soconaysaa”.
Arsene Wenger oo ka hadlayey in uu kooxda uga tagey lacag iyo arimo kale Cesc wuxuu yiri “
“Hadii aad fahamaysaan hal mid waa inaanu Cesc uga tagin kooxda arimo dhaqaale ama aanu jecleyn kooxdan (Arsenal), Cesc wuxuu u hilboobay in uu ciyaaro kooxda gobolkii uu ku dhashay ka dhisan halkaasi oo ah halkii uu wax ku soo bartey, wayna adag tahay in arintaasi laga diido”.
Daawo Video ku saabsan qaab ciyaareedkii Cesc ee Arsenal.
Mowliid Xaaji Cabdmowliidsons@gmail.com